अन्तर्वार्ता « Janata Samachar
प्रधानमन्त्री त ओली हुन्, राष्ट्रपतिबारे छलफलै भएको छैनः भट्ट
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने विषयमा कुनै विवाद नभए पनि राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषयमा दुवै पार्टीमा
एनसेलको अरबौँ कर बाहिरिँदा बैंकमा तरलता अभाव देखियोः लंक केसी
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का अध्यक्ष लंक केसीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण निर्माण योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भएको छ । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सन्दर्भ’मा समाचार संयोजक रामकुमार एलनसँगको
देउवाले राजीनामा दिनु हुँदैनः पाण्डे
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने बताउनु भएको छ । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सन्दर्भ’मा समाचार संयोजक
भेडा, भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग मिले जस्तै हो वाम एकताः दाहाल (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने संकल्प अनुरुप माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता हुन लागेको बताउनुभएको छ । जनता टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष दाहालले
काठमाडौँमा १ मा प्रकाशमानसँग मेरो तुलना हुँदैन, रविन्द्र त कता–कता ?
काठमाडौँ । वाम गठबन्धनबाट काठमाडौँ–१ का उम्मेदवार अनिल शर्माले आफू काठमाडौँ १ कै मतदातासँग लामो समयदेखि समीपमा रहेको बताए । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सन्दर्भ’मा पत्रकार रामकुमार एलनसँग कुराकानी गर्दै नेता
उपत्यकाको विकासमा यस्ता छन् केशव स्थापितका योजना (भिडियोसहित)
काठमाडौं । मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ ‘क’का उम्मेदवार केशव स्थापितले आफुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार नभएको दावी गरेका छन् । जनता टेलिभिजनबाट
रामवीर मानन्धर भन्छन्ः अब सुशासनमा देश हिँडाउन जरुरी छ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्धरले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नेकाम प्रतिनिधिसभा सदस्यको भएको बताउनुभ भएको छ । जनता टेलिभिजको कार्यक्रम ‘सन्दर्भमा’ कुराकानी
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अहिले नेपाली कांग्रेससँगको तालमेलपछि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी अभियानमा हुनुहन्छ । कांग्रेससँग भएको तालमेलपछि डा. भट्टराईले गोरखामा चुनावी अभियानलाई तीब्र पारिरहनुभएको
संस्कृत विश्वविद्यालय नेपालको पहिचन होः उपकुलपति कोइराला (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यायका उपकुलपति प्रा.डा.कुलप्रशाद कोइरालाले विश्वका जातजाति, धर्म संस्कृति र संस्कारको उत्पतिदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको इतिहास बताउने एक मात्र नेपला संस्कृति विश्वविद्यालय भएको बताउनु भएको छ । जनता
‘वाम एकता आमाले बेलुका चिनाएको बाउ भोलिपल्ट अर्कै परेजस्तोे’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विश्वभक्त दुलालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धन ठीक भए पनि पार्टी एकताको घोषणा दुई पार्टीका शीर्ष नेताको निरंकुशताको परिणाम भएको बताउनुभएको छ
काेराेना संक्रमण बढ्दै गएपछि सेना परिचालनको तयारी
कोरोना नियन्त्रण गर्न १ लाख सुरक्षाकर्मी मैदानमा
२ लाख घुससहित २ सहायक बन अधिकृत अख्तियारको नियन्त्रणमा
२०७७ जेठ २१ गतेको राशिफल
नेपालमा डेढ लाखलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो